Zimbabwe: Zanu-PF Remains Strong As the Nation Celebrates ...
Apr 12, 2019· Also, the nation has vast natural resources such as minerals and fertile soils that it can independently utilise to build a better Zimbabwe for the future generations. Long live Zimbabwe…
Jul 27, 2012· Namibia's mining sector will continue to flourish with a lot of private-sector investments in minerals beneficiation and marketing. In addition, a growing global awareness about the wealth of untapped mineral resources in Namibia hints on bright prospects for …
Jul 20, 2018· Zimbabwe's Membership in International Organizations. Since independence, Zimbabwe has enunciated and follows a policy of "active nonalignment." Zimbabwe and the United States belong to a number of the same international organizations, including the United Nations, International Monetary Fund, World Bank, and World Trade Organization.